धुलिखेलमा काँग्रेस ब्राण्डको पानी जार ! – Namaste Dainik
June 8, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on धुलिखेलमा काँग्रेस ब्राण्डको पानी जार !
धुलिखेल,२६ जेठ । धुलीखेलमा नेपाली कांग्रेसले वितरण गरेको पानीको जारमा पार्टीको प्रचार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । लकडाउनको समयमा अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्ने नाममा पनि राजनीति घुसाइएको भन्दै आलोचना भएको हो । लामो समय देखिको लकडाउनका कारण अप्ठेरो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । यस्तो समयमा केही सामाजिक अगुवा, राजनीतिक दलका नेताहरु सहयोगका लागि अघि आएका छन् ।
तर कसैले भने विपदको बेलामा सहयोग गर्ने नाममा राजनीतिक प्रचार गरेको भन्दै आलोचना भएकोह हो । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट धुलिखेल नगरपालिका मेयरका प्रत्याशि एवं काँग्रेसका प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिने रमेशप्रसाद हुमागाईले आफुले वितरण गरेको पानीको जारमा ठूला ठूला अक्षरमा नेपाली कांग्रेस भन्दै लेखेर वितरण गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ । उनले आफै धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ३ का विभिन्न गाउँ पुगेर ‘नेपाली काँग्रेस धुलिखेल’ लेखिएको पानीको जार वितरण गरेका छन् ।
उनको साथमा जिल्ला सदस्य समिर ब्याञ्ञु श्रेष्ठ वडा सभापति प्रल्हाद आचार्य, युवा नेताहरु सजय तामाङ र श्याम दर्शन गणेजु लगायत नेपाली काँग्रेस धुलिखेल नगर समितिका पदाधिकारी पुगेका थिए । राहत वितरण पछि हुमागाईले आफ्नो फेसबुकमा फोटो पोष्ट गर्दै लेखेका छन् ।
‘कोरोना जोखिम कम गर्न आज नेपाली कांग्रेस धुलिखेल नगर समितिबाट उपलब्ध खानेपानी जार ३ सेट र सेनिटाईजर धुलिखेल नगरपालिका वडा नं ३ को आचार्य गाऊँ,w तल्लो कुत्ताल र चंखुवेशीमा रहेको ३ वटा दुग्ध डेरीहरुलाई हस्तान्तणर गर्यौ ।’उनको यो स्टाटस पछि सामाजिक सञ्जालमा नेपाली कांग्रेस व्राण्डको पानीको जार भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिएको छ ।
चीनसङ्ग सजिलै वार्ता गर्न मानेको भारत आखिर किन नेपालसँग वार्ता गर्न मानेको छैन।
काठमाडौँमा डरलाग्ने गरी बढ्यो कोरोना संक्रमण, बढ्यो त्रास
बिलिङ प्रणालीमा आएको समस्याले टेलिकमका हजारौं ग्राहकको ब्यालेन्स काटियो ! फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौं ।
September 17, 2020 September 17, 2020 Namastedainik